dadarabe - Agir avec Madagascar
Poème: L’AMOUR - DadaRabe
L’AMOUR Même si l’amour Ne serait pas pour toujours… Essaie quand même de pouvoir… Espérer et de croire… Pas au simulacre, Mais au miracle. Car l’amour est sacré, L’amour peut sauver Une âme qui déambule, Un esprit qui recule, Et la vie sera meilleure…...
Poème: UN LENDEMAIN - DadaRabe
ILAY AMPITSO Manofy ilay ampitso mamerovero fatratra; Manofy lendalenda, diavolana tomaratra; Manofy taona zina sy fararanom-bokatra; Manofy tojo tanjona, tafakatra ny tohatra. Manofy fahasambarana, fotoana paradisa; Manofy fisantarana ny mamy tsy hita...
Poème: Complainte de compatriotes
… ISIKA Manaiky ny anjara ! Manaiky ny tantara ! Manaiky izay ambara ! Manaiky izay voarara ! Dia indro tsy miezaka hanova fomba fiaina, Dia indro pitrapitra noho ny zavona maraina, Izany no efa anjara, atao ahoana moa ? Toniana hatreo ny saina, ononina...
Poème: TU LUI AS DONNÉ- DadaRabe
EFA NOMENAO AZY Efa nomenao azy ilay mamy nihantana Sy nifampizarana, Ho lasa sangisangy sy kilalaony koa…… Ventesiny ao am-po ! Dia izy no mihira, Mifaly hikirakira. Efa nomenao azy ilay fahasambarana Nataoko tsy hifarana, Niainako tantara sy angano,...